BBC Somali - Ganacsi - Qorshe lagu soo rogayo shirkadaha
Qorshe lagu soo rogayo shirkadaha
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 2 September, 2012, 15:03 GMT 18:03 SGA
Kaararka ay dadku u isticmaalaan inay wax ku bixiyaan
Dowladda Britain ayaa bilaabeysa qorshe ay ku dooneyso inay ku mamnuucdo in shirkadaha ganacsida ay dadka ku soo rogaan lacago xad dhaaf ah oo la saarayo dadka isticmaala inay wax ku bixiyaan kaararka debit ama credit.
Qorshahan ayaa markiisi hore waxaa lagu dhawaaqay bishii Disember kadib markii uu ku taliyay xafiiska ganacsiga xaqa ah ee dalka.
Shirkadaha diyaaradaha, Tiyaarada iyo ganacsatada kale ayaa waxa ay inay sid cad marka hore u sheegaan lacagaha ay dadka ay ka qaadanayaan kaararkooda.
Dowladda waxaa sidoo kale ay xadidi doontaa inta dadka lagu dalacayo, taasi oo ah in shirkaduhu aanay faa'iido ka sameyn karin dadka.
Shirkadaha ma awoodi doonaan inay faa'iido ka sameeyaan lacagaha ay kaga qaataan kaararka deynta iyo kuwa debit marka ay macaamiishu isticmaalaan.
Ganacsi City Group oo bixinaysa 7 bilyan oo ganaax
14 Luulyo 2014